Deg deg:Muxaadaradii shiikh Umal bari qaban lahaa oo markii labaad baaqatay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Deg deg:Muxaadaradii shiikh Umal bari qaban lahaa oo markii labaad baaqatay
November 23, 2019 Duceysane455
Muxaadaradii dooda badan ka taagneyd ee uu qaban lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa mar kale la baajiyay, sida ay xaqiijisay Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka mid ah Guddiga qaban qaabada muxaadaradaas.
Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in muxaadarada berri oo Axad ah uu ku qaban lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal Garoonka kubadda cagta Eng. Yariisow la baajiyay.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay dood badan ayaa ka taagneyd muxaadaradaas oo jimcihii la baajiyay, kaddib markii Sheekh C/qaadir Soomow oo ka mid ah Culimada Ahlusuna uu ka soo horjeestay muxaadarada Sheekh Umal, kuna baaqay in aysan raalli ka aheyn.
Dariiqada Suufida ayaa si weyn uga soo horjeestay muxaadarada Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ay ku eedeeyeen inuu Culimada Suufida uu gaalleysiiyay, sidoo kale uu aflagaado u geystay Nabi Muxumed NNKH.
Bayaan ay Culimada Dariiqada Suufida ka soo saareen Muqdisho waxay ugu baaqeen dowladda Federaalka inay joojiso Muxaadaradaas, iyagoo uga digay in haddii la qabto ay wixii ka dhasha ay mas’uuliyadeeda qaadi doonto dowladda Federaalka.